Ikewa Osimiri Uhie | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ọrụ Ebube Jehova Rụrụ n’Osimiri Uhie
Ozugbo Fero nụrụ na ndị Izrel ahapụla Ijipt, o wutere ya na ọ hapụrụ ha ka ha laa. Ọ gwara ndị agha ya, sị: ‘Kwadebenụ ụgbọ ịnyịnya agha m niile, ka anyị chụwa ha. Anyị agaraghị ahapụ ha ka ha laa.’ Fero na ndị agha ya chụụrụ ndị Izrel gawa.
Jehova ji ígwé ojii na-edu ndị ya n’ehihie, jirikwa ọkụ na-edu ha n’abalị. O duuru ha ruo n’Osimiri Uhie, ma gwa ha rụọ ụlọikwuu.
Ndị Izrel hụziri Fero na ndị agha ya ka ha chụ ha na-abịa. Ha nọ n’etiti oké osimiri na ndị agha Ijipt. Ha besaara Mozis ákwá, sị: ‘Anyị na-aga ịnwụ. Ị gaara ahapụ anyị n’Ijipt.’ Ma, Mozis gwara ha, sị: ‘Unu atụla egwu. Unu ga-ahụ otú Jehova ga-esi napụta anyị.’ Ihe a Mozis kwuru gosiri n’eziokwu na ọ tụkwasịrị Jehova obi. Ọ̀ bụ na ì cheghị otú ahụ?
Jehova gwara ndị Izrel ka ha kwalie. N’abalị ahụ, Jehova mere ka ígwé ojii ahụ dịrị n’etiti ndị Izrel na ndị agha Ijipt. O mere ka ọchịchịrị dịrị n’ebe ndị Ijipt nọ ma mee ka ìhè dịrị n’ebe ndị Izrel nọ.
Jehova gwara Mozis ka ọ kụọ mkpara ya n’osimiri ahụ. Jehova meziri ka oké ifufe fee n’abalị ahụ niile. Osimiri ahụ kewara ụzọ abụọ, e nwee ụzọ n’etiti ya. Ọtụtụ nde ndị Izrel jizi ụkwụ gafee osimiri ahụ n’ala akọrọ. Mmiri ya ghọọrọ ha mgbidi ma n’aka nri ma n’aka ekpe.
Ndị agha Fero chụụrụ ndị Izrel banye n’ala akọrọ ahụ. Jehova meziri ka ndị agha Fero nọrọ n’ọgba aghara. Ụkwụ ụgbọ ịnyịnya ha malitere ịdapụsị. Ndị agha ahụ tiri mkpu, sị: ‘Ka anyị si ebe a pụọ. Jehova na-alụrụ ha agha.’
Jehova gwara Mozis, sị: ‘Kụọ mkpara gị n’osimiri ahụ.’ Ozugbo ahụ, mmiri ahụ lọghachiri rikpuo ndị agha Ijipt. Fero na ndị agha ya niile nwụrụ. E nweghị otu n’ime ha fọrọ ndụ.
Mgbe ndị Izrel gafechara n’osimiri ahụ, ha bụrụ abụ ha ji too Chineke. Ha bụrụ, sị: ‘Bụkuonụ Jehova abụ, n’ihi na e buliela ya elu nke ukwuu. Ọ tụbara ịnyịnya na onye na-agba ya n’oké osimiri.’ Ka ha nọ na-abụ abụ a, ụmụ nwaanyị ha gbara egwú, kụọkwa ịgbà. Obi tọrọ ndị Izrel niile ụtọ na ha enwerela onwe ha.
“Ka anyị nwee obi ike wee sị: ‘Jehova bụ onye na-enyere m aka; agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?’”​—Ndị Hibru 13:6
Ajụjụ: Gịnị mere n’Osimiri Uhie? Olee otú Jehova si napụta ndị Izrel?
Ọpụpụ 13:21–15:21; Nehemaya 9:9-11; Abụ Ọma 106:9-12; 136:11-15; Ndị Hibru 11:29
A Zọpụta Ụmụ Izrel n’Oké Osimiri Uhie
See ihe ndị a na-eseghị na foto a ma tee ha kreyọn.